ပညာရေးဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ၎င်းသည်အဘယ်ကြောင့်အရေးကြီးသနည်း ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Paulo Freire က“ ပညာရေးကကမ္ဘာကြီးကိုမပြောင်းလဲဘူး၊ ကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်မယ့်သူတွေကိုပြောင်းလဲပေးတယ်။ ပညာရေးမရှိရင်အနာဂတ်မရှိဘူး၊ လူတိုင်းအတွက်ပိုကောင်း၊ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲ၊ အထောက်အပံ့နှင့်မျှတသောကမ္ဘာကြီးမျှော်လင့်ချက်ရှိသည်။ သူတို့ရရှိသောပညာရေးပေါ်တွင်မူတည်သည် ယခုနေသောသူ။ ယနေ့ကလေးများသည်မနက်ဖြန်၏ခေါင်းဆောင်များဖြစ်လိမ့်မည်။ အမှားများကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းပေးမည့်နည်းလမ်းသည်သူတို့ထံမှသင်ယူခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။
လူအများစုအတွက်ပညာရေးသည်ကလေးများဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူကြီးဘဝ၏တာဝန်ဝတ္တရားများရောက်လာသည့်အခါအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့သည့်ကလေးဘဝနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့, အမှန်တရားကနေနောက်ထပ်မဖြစ်နိုင်ပါ အသိပညာပင်မမဟုတ်ပါဘူး, ဘယ်သူမှသိ။ မွေးဖွားသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကလေးများ၏ပညာရေးသည်သူတို့၏သင်ကြားရေးကိုတာဝန်ယူရသောပြည်သူလူထု၏ပညာရေးအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ၎င်းသည်တိုးတက်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းနှင့်မသိသောအရာများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းများကိုရပ်တန့်ရန်မခိုင်မာသည့်အကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းဟာဖခင်ကောင်းတစ်ယောက်၊
သင်သည်အသစ်သောအရာများကိုသင်ယူရန်အသက်ကြီးလွန်းသည်မဟုတ်ပါ ထို့အပြင်ပညာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုတို့တွင်တိုးတက်ရန်၊ အချိန်၊ အားစိုက်မှုနှင့်ငွေများရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်နောက်ကျလွန်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်အဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုရထိုက်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေတဲ့တခြားသူတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်စဉ်းစားမိလို့ပါ။ အသစ်သောအရာများသင်ယူခြင်းသည်သင့်အားသင်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်သာမကသင်၏အတွင်းပိုင်းလမ်းကြောင်း၊ အရာနှင့်ပတ်သက်သောအသိပညာနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။
ပညာရေးသည်အသိပညာဗဟုသုတကိုလူတစ် ဦး ထံသို့ဖြန့်ဝေခြင်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာကွဲပြားခြားနားသောအလုပ်များကိုကျွမ်းကျင်မှု နည်း၍ သို့မဟုတ်နည်းပါးစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် didactic ဗဟုသုတကိုသင်ယူရုံသက်သက်မဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ပညာရေးသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည် အခြားသတ္တဝါများအားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့်လေးစားမှုတို့ဖြင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းတွင်နေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
ပြီးတော့ဒါတွေအားလုံးကိုမင်းဘဝတစ်လျှောက်လုံးတိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗဟုသုတတွေဆည်းပူးတာကတာဝေးပစ်အလုပ်ပဲ။ ပညာရေးကိုဘဝစီမံကိန်းတစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အမြဲတမ်း၊ မည်သည့်အချိန်၌မဆို၊ သင်သည်အသစ်သောအရာများကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင် သင်၏လေ့ကျင့်မှုတိုးတက်လာခြင်းကသင့်အားအသစ်ပြန်လည်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်, သင်၏အသိပညာပြန်သုံးနှင့်သင်အမြဲပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်သောပျော်ရွှင်မှုကိုပေးနိုငျသောလယ်ပြင်၌ပညာရှင်ပီသစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ပါ။
ပညာရေးနယ်ပယ်၌, အခွင့်အလမ်းများအဆုံးမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုအားလုံးကိုအချက်တစ်ခုတည်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်၏စွမ်းရည်ကိုကန့်သတ်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာတစ်ခုထက်ပို။ သိ။ မေးခွန်းတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့များစွာသောလူများထံမှသင်ယူခြင်းသည်သင်၏စိတ်ကိုမွေးမြူခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ဤကဏ္sectionတွင်ပညာရေးကိုစကားလုံး၏အကျယ်ဆုံးအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုပါကသင်၏ပညာရေးတိုးတက်စေရန်အတွက်အမျိုးမျိုးသောသင်ယူမှုအမျိုးအစားများကိုသင်ရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည်။
သင်၏စကားရပ်တိုးတက်စေရန်နည်းလမ်းများအားကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရှာဖွေသည်။ တောင်မှကွဲပြားခြားနားသောသင်ယူမှုနည်းစနစ်များ သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလမ်းကြောင်းတွင်သင့်ကိုသူတို့ကကူညီလိမ့်မည်။ အခွင့်အလမ်းတွေအကြောင်းလည်းပြောကြမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကပညာရေးကိုအခြေခံထားတယ်၊ မျှော်လင့်ချက်တွေတိုးတက်လာတယ်။
ဒီအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုရှာဖို့အချိန်နဲ့အားစိုက်ထုတ်ဖို့မလိုတော့ဘူး၊ ဤအပိုင်း၏ပညာရေးကဏ္optionsတွင်သင်သည်ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးကိုတွေ့လိမ့်မည် သင်၏အသိပညာကိုချဲ့ထွင်ရန်အရာနှင့်အတူ။ လူမှုရေး၊ သိပ္ပံနည်းကျ၊ စာပေအဆင့်နှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏ပညာရေးကိုဆက်လက်တိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုသောအရာအားလုံးအပေါ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင့်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သင်၊ သင်၏ပညာရေးနှင့်သင်ကြားရေးတို့တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ၎င်းသည်လိုအပ်ရုံသာမကသင်၏ကိုယ်ပိုင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အခြေခံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရိုးရှင်းသည့်စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမဟုတ်သင့်ပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏အနာဂတ်အတွက်သင်ပြုလုပ်နိုင်သောအရေးကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအပ်နှံခြင်းဖြစ်သည်။
အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာရန်နည်းလမ်းအချို့သည်အတော်လေးလွယ်ကူသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဝေါဟာရအလွတ်ကျက်ခြင်းသို့မဟုတ်သဒ္ဒါသင်ယူခြင်းသည်မေးခွန်းများဖြစ်သည်။
"ဒါဟာကျေးဇူးတင်တတ်ဖို့မွေးဖွားလာတာပါ" လို့လူကြိုက်များတဲ့စကားပုံကဆိုပါတယ်။ ဒါဟာမမေ့သင့်တဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အမှန်တရားပဲ ...
Correos 2020/2021 ပြိုင်ပွဲ - ဤသည်မှာမှတ်ပုံတင်ရန်နေ့ရက်များဖြစ်သည်
por Encarni Arcoya လွန်ခဲ့တဲ့ 1 တစ်နှစ် .
ယနေ့ယှဉ်ပြိုင်မှုဆိုင်ရာစာမေးပွဲများသည်တည်ငြိမ်သောအလုပ်တစ်ခုရရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာ ...
အကယ်၍ သင်သည်အတွေးအခေါ်နှင့်စိတ်ပညာကိုစဉ်းစားရန်ရပ်တန့်ခဲ့ပါက၎င်းတို့သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲပြားသော်လည်းအခြားတစ်မျိုးမှာမူ ...
neologisms ဆိုတာဘာလဲ? သင်သည်ထိုအရာကိုကြားပြီးယင်းတို့ကိုအတိအကျမသိဘဲအသုံးချနိုင်သည်။ ဘို့…
ဥပစာစကားများကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။ ကက်စတီလီယန်သို့မဟုတ်စပိန်ဘာသာသည်အလွန် ...
ပွင့်လင်းသောမေးခွန်းများအကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောသောအခါ၎င်းသည်တံခါးပိတ်မေးခွန်းများနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ မေးသောအခါပိတ်ထားသောမေးခွန်းများ, များသောအားဖြင့်ရှိသည် ...
တိရိစ္ဆာန်ဆဲလ်ဆိုတာဘာလဲ - ဖွဲ့စည်းပုံ, အစိတ်အပိုင်းများနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များကို
လိပ်စာ - အဓိပ္ပာယ်၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ အမျိုးအစားများနှင့်ဥပမာများ
ကွင်းဆင်းသုတေသနဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ အဆင့်များ၊ ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်နည်းစနစ်များ
စာသား ၁၆ မျိုးသည်ဘာတွေလဲ။